९० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक क्षतिबारे एक शब्द पनि नखर्चिनु अचम्म ! | Aaja ko Shiksha
९० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक क्षतिबारे एक शब्द पनि नखर्चिनु अचम्म !
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी
कोरोना भाइरसले पुर्याएको शैक्षिक क्षतिबारे सरकारद्वारा २०७७/०७८ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा एक शब्द पनि खर्च गरिएको देखिएन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टर्नेट सेवा पुर्याइने उल्लेख गरियो । साथै, विद्युत्तीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका ८२ लाख ५८ हजार ७८३ र उच्च शिक्षाका झण्डै ७ लाख विद्यार्थी यतिबेला कोभिड–१९ को जोखिमका कारण घरमै लकडाउनमा छन् । उनीहरुलाई कोभिड–१९ ले पारिरहेको प्रभावका विषयमा केही पनि सम्बोधन नगरिनुलाई आश्चार्यका रुपमा हेरिएको छ । बालबालिकामा परिरहेको मनोवैज्ञानिक असर तथा समग्रको शैक्षिक क्षति विद्युत्तीय शिक्षण सामग्री तयारी र माध्यमिक विद्यालयमा इन्टर्नेट जडानले पूरा हुन्छ र ? नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई लिएर अहिले यही प्रश्न उब्जिएको छ ।
एसइइ, कक्षा ११ तथा प्राविधिक धारका परीक्षाहरु स्थगित छन् । मानसिक रुपमा तनाबमा परेका विद्यार्थीलाई ढाडस दिने प्रकारको कुनै पनि शब्द राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा देखिएन । ‘कमसेकम मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिने र यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा परामर्श केन्द्रहरु स्थापना गर्ने कार्यक्रम भइदिएको भए विद्यार्थीमा तत्काल देखिएको समस्या टर्नेथियो,’ शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको टिप्पणी छ । शब्दै खर्च नगरिएको भएपनि कार्यक्रमले इन्टर्नेट जडान र विद्युत्तीय शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने भन्नुचाहिँ तत्कालका लागि नभएर ‘पोस्ट कोभिड–१९’ लाई सम्बोधन गर्न खोजिएको प्रा.डा. वाग्लेको बुझाइ छ । ‘अहिले नै कार्यक्रममाथि नकारात्मक नहोऔं तर घोषित कार्यक्रम पनि पूरा हुने/नहुने आउँदो बजेट भाषणले तय गर्छ,’ उहाँको प्रतिक्रिया छ ।
त्यसो त, यो पल्ट पनि शिक्षा बजेटको कूल प्रतिशत नबढ्ने संकेत सरकारी अधिकारीहरुले दिइसकेका छन् । इन्टर्नेट जडान हुन नै एक वर्ष लाग्न सक्छ । त्यत्तिञ्जेल विद्यार्थी नपढी बस्ने हो ? परीक्षाका सन्दर्भमा खोई सम्बोधन ? नीति तथा कार्यक्रम सुन्नेहरुको प्रश्न छ ।